Ngaphambi kokuba uhlole umbuzo wokuthi ungathola kanjani indawo yokusingatha, udinga ukuthola ukuthi ukubamba ukuphi.
Ukubamba indawo yindawo ebonakalayo yokugcina nokubeka izinsiza ezihlukahlukene ze-intanethi kwinethiwekhi: amawebhusayithi, ama-portals, izinhlelo zokusebenza zokudlala nezinye izinto ezifanayo. Umnikazi ngamunye udala indalo yakhe hhayi yena ngokwakhe, kodwa ukuze wabelane nabanye. Ukuze wenze lokhu, isayithi kufanele ibekwe ukubukwa komphakathi. Futhi usizo luza izinkampani ezithatha indawo enikeza isikhala kuseva yabo. Eqinisweni, ukusingathwa yinkampani enesiphakeli futhi inikeza abanye. Kuneziningi zazo namuhla. Kunezinkampani ezinikela ngezinsizakalo zokubamba mahhala, futhi zikhona namaseva wamahhala.
Ukusingatha Iwebhusayithi ngokuvamile kuvame umnikazi wayo. Kodwa empilweni kungaba khona amacala ahlukene uma udinga ukufunda ukusingathwa komthombo womunye umuntu. Ake sithi isayithi lakho libukeka lihle, lisebenza kahle, kodwa abancintisana benza ngcono. Uqala ukuba nesithakazelo kumbuzo wokuthi ungathola kanjani indawo yokubamba, ukuze nami nginakho. Noma, ukuzulazula ngaphakathi kwe-Internet, uthola izinsiza eziqala ukukuthakazelisa ngezizathu ezahlukene. Futhi futhi kukhona isifiso sokuthola ukuthi ukusingatha isayithi.
Ukubamba ukufunda akuyona kunzima kakhulu. Kunezindlela ezintathu zangempela zokuthi lokhu, okusebenza kahle futhi akulukhuni kakhulu ukuyiqonda nokusebenzisa. Indlela yokuqala ihilela ukuthola ukuxhumana okuholela ekubanjweni kwaleli sayithi. Ngokuvamile zikhona kuwo wonke amakhasi. Ngokuvamile, esikhundleni sokuxhumanisa kumakhasi ezinsiza ezifana nokuthi "Mayelana nesayithi", "Oxhumana nabo", ibhanna yenkampani ingabanjwa. Amawebhusayithi anegama elinjalo lamagama adalwe ngabaqambi bewebhu abasebenza ekubanjweni.
Indlela yesibili yokuthola indawo yokusingatha isayithi ukuxhumana nesevisi yokweseka lobuchwepheshe noma uxhumane nokuphathwa kwesayithi oyithandayo. Ukwenza isenzo esinjalo kulula: amasayithi amaningi anefomu lempendulo, esebenzisa lapho, kulula ukuxhumana nomunye umuntu. Noma kunjalo kukhona amakhasi lapho othintana nabo bexhumana khona namakhasimende kufakwa. Ungacacisa ikheli le-imeyli, inombolo ye-ICQ, inombolo yocingo, i-Skype. Ulwazi olunjalo lunengqondo ukucinga kulawo masayithi lapho kungekho khona izixhumanisi namabhansela okukhomba ukusingathwa.
Ngezinye izikhathi kwenzeka: baxhumana nensizakalo yokusekela lobuchwepheshe, kodwa ayikho impendulo. Olunye ulwazi olumthombo aluhlinzekiwe. Ezimweni ezinjalo, kunendlela yesithathu, incazelo yokusingatha isayithi. Iwebhu inezinsizakalo ezikhethekile eziqoqa bese zinikeza ulwazi mayelana nanoma yisiphi isizinda. Ukuphendukela ezinsizeni zamathuluzi anjalo jikelele, ungakwazi ukuthola kalula ukubamba kwakho okuthandayo. Ikheli lakhe libizwa ngamaseva akhethekile, futhi kuthiwa yi-NS. Enye yezinsizakalo ezidume kakhulu ezizosiza ukuthola kuphela ikheli lokubamba, kodwa futhi uthole ulwazi olwengeziwe lokuthi ungabheka kanjani isizinda, yi-WHOIS.
Akunzima ukusebenza nesevisi, noma yikuphi umuntu omusha ozobhekana nayo. Ukuze uphendule umbuzo mayelana nokuthi ungathola kanjani indawo yokusingatha indawo, kufanele ubhale i-URL yensiza oyithakazelisayo enkambu yesizinda ecacisiwe, bese uchofoza inkinobho yokusesha noma ucindezela ukhiye wokungena kwikhibhodi. Ngempela iminithi ngaphambi kokuba uqokonyiswe yonke imininingwane etholakalayo yokubuka umphakathi mayelana nesizinda. Phakathi kwakhe, kufanele uthole amagama esiphakeli okukhulunywe ngenhla: NS (esikhundleni salolu hlobo kungase kube nenkundla ye-nserver).
Ngaphambi kokuthi ubone imibhalo, ifana ne- "ns1.adres.domen", "ns2.adres.domen". Yini ezobhaliwe kusayithi "... adres.domen", futhi uzodinga ikheli lokubamba lale nsiza. Kuzodingeka nje ukopishe isixhumanisi esivele kulayini lwesiphequluli bese uhamba phezu kwayo. Iwindi lesayithi elisemthethweni lokubamba unentshisekelo kulo lizovula, lapho ikheli lensiza lizobhalwa khona, okudingekayo.
I-ASUS VX239H: ukubuka konke, izici nokubuyekezwa kwabanikazi
Alpine ibhungane longhorn - ibhungane enhle kakhulu
Izakhiwo awusizo lamagilebhisi. Calorie ujamu kuzo.